Ny antoko politika tsirairay, izay voakasika amin'ny fizotran'ny fifidianana, dia manana adidy lehibe hanabe sy hampahafantatra ny mpomba azy ny mombamomba ny fifidianana. Maro ireo antoko anefa no tsy miraika amin`izay fanabeazana ara-pifidianana izay. Ireo antoko lehibe indray dia maika amin`ny fametrahana rafitra sy paikady famolavolana, fa hadino ny lafiny fanabeazana. Matetika, mialoha ny fotoam-pifidianana vao tena tsaroana ity hetsika ity. An-tanàn-dehibe, mety maivana ny raharaha satria tsy dia zava-dehibe loatra ny fampielezan-kevitra. Marihana fa amin`ny alalan`ny fanabeazana no ahafahan`ny olom-pirenena tsirairay mety ho liana sy miditra amin'ny politika. Ny fahatsapana ho fandavana ny politika niainan'ny mpifidy maro dia vokatry ny tsy fahatokisan' ireo hery politika. Ity vondrona mpifidy ity anefa no tena mitsikera fitondrana iray. Izy ity anefa no tsy manao ny adidiny amin`ny maha mpifidy azy. Eo indrindra no andraikitry ny mpitondra ara-politika. Adidiny no manabe ny olom-pirenena hirotsaka an-tsehatra mialoha, mandritra ary aorian`ny fifidianana mba tsy hiampangany ny tenany aty aoriana raha toa ka misy ny tsy fahombiazan'ny raharaha. Ny olom-pirenena dia tsy maintsy miditra bebe kokoa, mba hampihatra ny zony. Aoka ihany koa hotsaroana fa ny demokrasia dia ny lalàn'ny maro an'isa ka izany no mitarika azy.